လူးဝစ် Martinez | 01/10/2021 11:30 | ခရီးသွားနေရာများ, Espana
မေးခွန်း၏အဖြေ စပိန်မှာအားလပ်ရက်မှာဘယ်သွားလည်မလဲ ၎င်းသည်မျိုးစုံဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအဖြေတစ်ခုတည်းကိုဝန်မခံပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအားလပ်ရက်အချို့ကိုခံစားရန်ချစ်စရာနေရာများနှင့်ပြည့်နေသည်။ စိမ်းလန်းသောသဘာဝနှင့်အတူမြောက်ဘက်မှကြမ်းတမ်းသောကမ်းခြေများနှင့်အရသာရှိသောဟင်းလျာများနှင့်အတူတောင်ဘက်သို့၎င်း၏မွေ့လျော်ဖွယ်ရာသီဥတု၊ သူ့လူများနှင့်ကျယ်ပြန့်သောသဲသောင်ပြင်များ၊ စပိန်အားလုံးလည်ပတ်ရန်ထိုက်တန်သည်။
ဤအရာအားလုံးသည်သမိုင်းကိုဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲ ကာ့စ်တီ y Aragonနေသာသည် ဗလင်စီယာ (ဒီမှာငါတို့မင်းကိုထားခဲ့မယ် ဤမြို့အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်) သို့မဟုတ်အနည်းကိန်း Cataloniaမရ။ ဒါပေမယ့်စပိန်မှာအပန်းဖြေခရီးသွားဖို့နေရာ ၅ ခုကိုငါတို့အကြံပြုမယ်။
1 မမေ့နိုင်သောအားလပ်ရက်ကိုဖြတ်သန်းရန်ထူးခြားသောနေရာ ၅ ခု
1.1 San Sebastiánနှင့် Basque ကမ်းခြေ
1.1.1 Basque ကမ်းခြေ
1.2 ကောင်းမွန်သောအားလပ်ရက်ကိုကုန်ဆုံးရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနေရာများဖြစ်သော Cordoba နှင့်၎င်း၏မြို့များ
1.3 မသိသော Murcia သည်စပိန်၌အားလပ်ရက်သွားရန်အခြားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်
1.4 Rodrigo စီးတီး
1.5 Soria မြို့များ
မမေ့နိုင်သောအားလပ်ရက်ကိုဖြတ်သန်းရန်ထူးခြားသောနေရာ ၅ ခု
ငါတို့ပြောသမျှအားလုံးအတွက်မင်းမမေ့နိုင်တဲ့ပျော်စရာနေရာငါးခုကိုအကြံပြုဖို့ပေါင်းစပ်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုလုပ်မယ်။ စပိန်၌အားလပ်ရက်မရ။ သူတို့ကငါတို့နိုင်ငံရဲ့ထောင့်အားလုံးမှာပိုင်တာနဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့မတူကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုတတ်နိုင်သမျှကိုယ်စားပြုတာကိုသေချာအောင်လုပ်မယ်။
San Sebastiánနှင့် Basque ကမ်းခြေ
စပိန်၏မြောက်ဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များကိုစတင်ပါမည်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အကြောင်းငါတို့မင်းနဲ့စကားပြောနိုင်ခဲ့တယ် Santanderသမိုင်းကြောင်းမှ Asturias သို့မဟုတ်အဖိုးတန်၏ စီယံနယ်မှမရ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့မြို့တော်ကိုရွေးခဲ့တယ် Guipúzcoa ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်အရစပိန်နိုင်ငံရဲ့အလှဆုံးမြို့တွေထဲကတစ်ခုပါ။
ဒါဟာငါတို့သမိုင်းတစ်လျှောက်လည်ပတ်မှုအများဆုံးလည်ပတ်စရာနေရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမတော်တဆဘဲ။ အဖိုးတန်သည် La Concha ပင်လယ်အော်၎င်း၏ကမ်းခြေနှင့်အတူမင်းမျိုးမင်းနွယ်တို့အတွက်ရေချိုးစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်း၏အဆောက်အအုံများစွာသည်ထိုသမိုင်းဝင်ဂုဏ်ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
San Sebastiánသို့သင်၏ခရီးစဉ်ကိုစတင်နိုင်သည် အပိုင်းဟောင်း၎င်း၏ငါးဖမ်းဆိပ်ကမ်းနှင့်ကျော်ကြားသောမြည်းစမ်းနိုင်သော tavern များနှင့်ပြည့်နေသောလမ်းများနှင့်အတူ စည်သူလွင်မရ။ Santa María del Coro ၏အထင်ကြီးဖွယ် Baroque basilica နှင့် San Vicente ၏ Gothic ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့လည်းသွားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ Basque သမိုင်း၊ San Telmo ၏ပြတိုက်များ၊ Naval ပြတိုက်များကိုလည်းဤနေရာတွင်တွေ့လိမ့်မည်။ ထို့ပြင်တက်ရန်မမေ့ပါနှင့် Urgull တောင်ပင်လယ်အော်၏ထူးခြားသောရှုခင်းများကိုသင်တန်ဖိုးထားနိုင်သည်။
သို့ရာတွင် La Concha ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အဆုံးတွင်အခြားတောင်သည် ပို၍ ကျော်ကြားကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတို့မင်းအကြောင်းပြောကြမယ် Igueldo တောင်ရှုခင်းအပြင်၊ သင်၌အပန်းဖြေပန်းခြံရှိသည် Belle ယုဂ် dizzying roller coaster နှင့်အတူ အဲဒီကိုရောက်ဖို့ ၁၉၁၂ ခုနှစ်ကတည်းကပြေးဆွဲနေတဲ့ကြိုးဆွဲဟောင်းကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ သင် San Sebastián၌ခေါ်ဆိုမှုကိုသင်တွေ့ရပါမည် အချစ်ဧရိယာမြို့၏ချဲ့ထွင်မှုဧရိယာနှင့်တစ်ထပ်တည်းကျပြီး Gran Gran ဟောင်းအဆောက်အအုံ၊ Victoria Eugenia ပြဇာတ်ရုံသို့မဟုတ် Hotel María Cristina တို့ကဲ့သို့ ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှအဆောက်အအုံများပါဝင်သည်။ သို့သော်ဤမြို့၏အထင်ရှားဆုံးတည်ဆောက်မှုမှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် ကောင်းသောသိုးထိန်းဘုရားရှိခိုးကျောင်း၁၈၉၇ ခုနှစ်တွင် neo-Gothic canons များအတိုင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်Guipúzcoaရှိအားလပ်ရက်ကမင်းကို San Sebastiánမှာမကုန်ဆုံးစေတဲ့အံ့သြဖွယ်ရာများ။ Basque ကမ်းခြေရှိအနီးအနားရှိမြို့များသို့သွားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးသည်။ လူတကာတို့၊ ဟာနန်သမိုင်းဝင်အချက်အချာကျသောနေရာသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Azcoitia၎င်း၏မျှော်စင်အိမ်များကဲ့သို့များပြားလှသောအဆောက်အ ဦး များ၊ ဟွန်ဒါရီရီယား၎င်း၏ခံ့ညားသောမြို့ရိုးများနှင့်တံငါရွာငယ်များကဲ့သို့ဖြစ်သည် Getaria ခမ်းနားတဲ့ကမ်းခြေတွေကိုတွေ့နိုင်မယ့်နေရာ။
ကောင်းမွန်သောအားလပ်ရက်ကိုကုန်ဆုံးရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနေရာများဖြစ်သော Cordoba နှင့်၎င်း၏မြို့များ
မင်းစပိန်မှာအားလပ်ရက်မှာဘယ်သွားရမယ်ဆိုတာတွေးနေတယ်ဆိုရင်ငါတို့ကမင်းဘဝမှာအနည်းဆုံးတစ်ခါလောက်သွားလည်သင့်တဲ့ခရီးတစ်ခုအကြောင်းမင်းကိုပြောပြလိမ့်မယ်။ Caliphate အစဉ်အလာနှင့်အံ့သြဖွယ်အထိမ်းအမှတ်များနှင့်အတူသမိုင်းဝင် Cordoba ကိုကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်နာမည်အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည့်မတော်တဆမှုမဟုတ်ပါ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ကမ္ဘာကြီးကို။
ဘီစီဒုတိယရာစုတွင်ရောမလူမျိုးများကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Cordoba သည် Caliphate မြို့တော်ဖြစ်သည့်အခါမွတ်ဆလင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိခဲ့သော်လည်းခေတ်အားလုံးတွင်အထိမ်းအမှတ်များစွာရှိသည်။
ရောမပြဇာတ်ရုံ၊ တံတားနှင့်ဘုရားကျောင်းသည်အခြားလက်ရာများတွင်လက်တင်ခေတ်ကဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မြို့ရဲ့မဟာသင်္ကေတကတော့ကျော်ကြားပါတယ် ဗလီ၈ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော Visigoth ဘုရားကျောင်းဟောင်းတစ်ခု၏လက်ကျန်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်၎င်းသည် Cordoba သို့သွားရန်သင့်အတွက်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ယနေ့တွင်၎င်းသည်ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်သော်လည်းမက္ကာနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်ဗလီတို့ပြီးလျှင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ မင်းမြင်နိုင်တဲ့အထဲမှာ Patio de los Naranjos၊ Renaissance ခေါင်းလောင်းမျှော်စင်၊ Postigo del Palacio (သို့) Santa Catalina ကဲ့သို့တံခါးများနှင့်ကျော်ကြားသော hypostyle အခန်းကဲ့သို့တံခါးများစွာရှိသည်။ တေးဂီတအဖွဲ့၊ အဓိကယဇ်ပလ္လင်သို့မဟုတ်အံ့မခန်းဖြစ်သည် macsura.
သင်ခန့်မှန်းထားသည့်အတိုင်းဗလီသည် Cordoba တွင်တွေ့မြင်နိုင်သောမွတ်ဆလင်ခေတ်မှတစ်ခုတည်းသောအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံမဟုတ်ပါ။ Guadalquivir စက်များသို့မဟုတ် Caliphate ရေချိုးကန်များသည်လည်း၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ပိုအရေးကြီးတာကခံ့ညားတယ် မက်ဒီနာ Azahara.
တောင်ခြေရှိ Cordoba မှရှစ်ကီလိုမီတာခန့်တွင်တည်ရှိသည် Sierra MorenaCaliph မှတည်ဆောက်ထားသောရှေးဟောင်း palatine မြို့ဖြစ်သည် Abderramán III ကိုမရ။ ၎င်း၏အသက်အရွယ်ရှိနေသော်လည်း၎င်းကိုအလွန်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။ မင်းမြင်နိုင်တဲ့အံ့သြဖွယ်တွေထဲမှာ Great Portico၊ အထက်ပိုင်း Basilica အဆောက်အအုံ၊ Rich Room (သို့) Jafar အိမ်။
Almodóvar del Río၏မြင်ကွင်း
မင်း Cordoba မှာနေတဲ့အတွက်ငါတို့လိုမျိုးမြို့တွေကိုလည်းသွားလည်ဖို့အကြံပေးတယ် Montilla၎င်း၏ရဲတိုက်ဟောင်းလက်ကျန်များ၊ လမ်းကြောင်း၎င်း၏အာရပ်ရုပ်ကြွင်းများနှင့် PriegoLa Villa ၏ရပ်ကွက်နှင့် Adarve ၏ Balcony နှင့်အတူ ဒါပေမယ့်လည်း Baena၎င်း၏ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များနှင့်အတူ; Zuherosလင်းနို့ဂူတည်ရှိရာနေရာ၊ Almodóvar del Río၎င်း၏ ၁၄ ရာစုဘုရားကျောင်းနှင့် HornachuelosMoratalla ၏နန်းတော်နှင့်ဥယျာဉ်များ၊ "Cordoba ၏ Versailles".
မသိသော Murcia သည်စပိန်၌အားလပ်ရက်သွားရန်အခြားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်
Murcia (calle Trapería)၊ စပိန်၌အားလပ်ရက်အပန်းဖြေရန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်
Murcia သည်ငါတို့နိုင်ငံ၏ခရီးသွားအများဆုံးနေရာများတွင်မပါ ၀ င်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အားကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်။ ပြီးတော့ငါတို့ကသူ့ရဲ့အံ့သြဖွယ်ကမ်းခြေတွေ၊ အထူးသဖြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်မှာတည်ရှိတာတွေချည်းဘဲ La Manga del Mar Menorနွေးထွေး။ သာယာသောရာသီဥတုလည်းမဟုတ်။
ပြည်နယ်၏မြို့တော်သည်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောအထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မြို့ဟောင်း၊ ပတ် ၀ န်းကျင် ကာဒီနယ် Belluga ရင်ပြင်ကြီးမားသောစိတ်ဝင်စားမှုရှိသည်။ ရှိပါတယ် Santa Maria ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းGothic၊ Renaissance နှင့် Baroque စတိုင်များကိုပေါင်းစပ်ထားသော ထို့အပြင် ၉၃ မီတာမြင့်သော၎င်း၏အံ့မခန်းခေါင်းလောင်းမျှော်စင်သည်မြို့၏သင်္ကေတဖြစ်သည်။
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဘေးမှာအဟောင်းရှိတယ် San Fulgencio ၏အဓိက Seminary နှင့် Episcopal နန်းတော်နှစ် ဦး စလုံးသည် ၁၈ ရာစုမှ ဒါပေမယ့်မင်းလိုမျိုးလူသွားလူလာများတဲ့လမ်းမတွေအလယ်ဗဟိုကိုလည်းလမ်းလျှောက်သင့်တယ် ငွေထည်နှင့်Traperíaမရ။ ပထမတွင်၊ ဟောင်း La Alegría de la Huerta ကုန်တိုက်စတိုးဆိုင်ကဲ့သို့ခေတ်မီအဆောက်အအုံများစွာကိုမြင်နိုင်သည်၊ ဒုတိယနေရာတွင်Almodóvar Palace နှင့် Gran Casino တို့ကထင်ရှားသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် Murcia ၌အသက်ဆိုင်ဆုံးအဆောက်အအုံများမှာတစ်ခုဖြစ်သည် Santa Clara la Real ဘုန်းကြီးကျောင်းသူ၏အတွင်းအပြင်အပြင်၌ကျန်ရှိနေသေးသည် Alcázarကိုလိုက်နာပါ၁၃ ရာစုမှအာရပ်နန်းတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်မြင့်မြတ်သော Andalusian အနုပညာလက်ရာပြတိုက်တစ်ခုကိုသင့်အားပေးသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ငါတို့က Segura မြို့မှာလည်းတွေ့ဖို့အကြံပေးတယ် ခေတ်သစ်ဗိမာန်များနှင့်အဆောက်အအုံများမရ။ ပထမ ဦး စွာPérez-Calvillo, Vinader, Fontes နှင့်Almudíမိသားစုတို့မှဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်အိမ်များမှာDíaz-Cassou, Almansa, Guillamónနှင့် Mercado de Verónicasတို့ဖြစ်သည်။
Ciudad Rodrigo ၏စီးတီးကောင်စီ
မြောက်၊ တောင်နှင့်အရှေ့ဘက်ရှိစပိန်၌အားလပ်ရက်အပန်းဖြေသွားရန်နေရာများအကြောင်းငါတို့ပြောပြီးပြီ။ ငါတို့အခုအနောက်ဘက်ကလှပတဲ့မြို့ကနေဒါကိုလုပ်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် Ciudad Rodrigo ကိုရည်ညွှန်းကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် သမိုင်းဆိုင်ရာအနုပညာ Complex.
ငါတို့ကမင်းရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အမွေအနှစ်ကသူ့အလိုလိုစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါတို့အသိအမှတ်ပြုရင်မင်းအံ့သြမှာမဟုတ်ဘူး ရိုးယနေ့ထိမပျက်မစီးထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။ မြို့ထဲရောက်နေပြီ၊ မင်းသူ့လိုအံ့သြစရာတွေရှိနေတယ် Henry II ရဲတိုက်ဆယ့်လေးရာစု၌ရက်စွဲ၊ ပု မြို့အမှုအရေးဆောင်ရွက်ရာအဆောက်အဉီRenaissance ပုံစံ၊ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ရောဂါကုသမှုဆေးရုံ.
ဒါပေမယ့်သူ့မှာအရေးပါတဲ့ဘာသာရေးဗိသုကာလက်ရာနဲ့ Ciudad Rodrigo လည်းရှိတယ်။ ဟိ Santa Maria ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းRomanesque Gothic သို့အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်သူ၏ Main Chapel သည်အံ့မခန်းကောင်းသော Spanish-Flemish ယဇ်ပလ္လင်ဖြစ်သည်။ San Andrésနှင့် San Cristóbalဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောဘုရားကျောင်းများသို့လည်းသွားလည်သင့်သည် Cerralbo ၏ ChapelHerrerian စတိုင်နှင့် San Agustín၏သီလရှင်နှင့် San Cayetano ၏ Seminary
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အရပ်ဘက်ဗိသုကာလက်ရာများသို့ပြန်လာပြီးVázquezနှင့် Cadena အိမ်များနှင့် Cartago ၏ Marchioness of Palace နှင့် Ciudad Rodrigo ရှိÁguilaတို့ကိုသွားလည်ရန်လည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။
ယခုငါတို့သည် Soria မြို့များကို ဖြတ်၍ ခရီးတစ်ခုအဆိုပြုရန်ကျေးလက်ဒေသစပိန်သို့ခရီးသွားနေကြသည်။ ၎င်းသည်တိုင်းပြည်၏အလှဆုံးများထဲမှအချို့ဖြစ်သည်။ ငါတို့ကမင်းလိုမြို့တွေအကြောင်းမင်းကိုပြောနေတာ Burgo က de OsmaSanta María de la Asunción၏အံ့မခန်းဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ၎င်း၏ဆေးရုံဟောင်း San Agustínနှင့်၎င်း၏ရဲတိုက်တို့ကျန်ရှိနေသေးသည်။
ဒါပေမယ့်ငါတို့ကြိုက်တဲ့မြို့တွေကိုလည်းရည်ညွှန်းတယ် Catalañazor၎င်း၏အလယ်ခေတ်ဆွဲဆောင်မှုအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားသည့်၊ Medinaceli၎င်း၏ရဲတိုက်နှင့်၎င်း၏နန်းတော်နှင့်၎င်း၏ကောလိပ်ကျောင်းနှင့်အတူ AlmazánRomanesque အမွေအနှစ်များနှင့်အတူ
အခြားသူများကဲ့သို့လူသိနည်းသည် Yanguas ပါခံ့ညားသောရဲတိုက်လည်းရှိသည်။ ရလိုထုံးကျောက်တောင်စောင်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည် Monteagudo de las Vicaríasရဲတိုက်မရှိလျှင် La Raya နှင့် Reward Palace နှစ်ခုရှိသည်။ ဤအရာများကဲ့သို့သောသဘာဝအံ့ဘွယ်သောအရာများကိုမေ့လျော့။ မရဘဲ၊ ဗီနူးUrbiónအထွတ်အထိပ်နှင့်နာမည်ကျော် Laguna Negra ၏တောင်ခြေတွင်တည်ရှိသည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်ငါတို့ကမင်းကိုနေရာငါးခုအကြောင်းပြောပြီးပြီ စပိန်မှာအားလပ်ရက်မှာဘယ်သွားလည်မလဲမရ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝမှုနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကအရမ်းကောင်းလွန်းလို့ငါတို့ကမင်းကိုအများကြီးပိုပေးနိုင်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်အဖိုးတန်သည် ကော့စတာ brava၊ လေ့လာရေးခရီး Cadiz မြို့များ (ဒီမှာသင်ရှိသည် သူတို့အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်) ၏အထင်ကရမြို့တော်ဖြစ်သည် Burgos သို့မဟုတ် ဂါလာစီယံRías Altas y Bajasမရ။ သူတို့ကမင်းအတွက်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့နေရာတွေလိုပုံမပေါ်ဘူးလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွားနေရာများ » စပိန်မှာအားလပ်ရက်မှာဘယ်သွားမလဲ။